Uhlobo lweNkunkuma yeeNkunkuma eziThuleyo zoMbane kunye neFektri | Naipute
Cwangcisa iJenereta ethuleyo
Njengombane wamandla okulondolozwa kwenethiwekhi yokuhambisa umbane, iiseti zejenreyitha ethe cwaka ziye zasetyenziswa ngokubanzi ngenxa yengxolo yazo ephantsi, ngakumbi kwizibhedlele, iihotele, iindawo zokuhlala eziphezulu, iindawo ezinkulu zokuthenga nezinye iindawo ezinemfuno engqongqo yengxolo yokusingqongileyo ziyimfuneko engxamisekileyo izixhobo. Kwiiyunithi ezinamandla aphezulu ngenxa yengxolo yazo ephezulu, kuphela sisixa esikhulu sokunciphisa ingxolo esinokwenza ukuba inqanaba lesandi leyunithi lihlangabezane neemfuno zangoku zokhuselo lokusingqongileyo. Ngesi sizathu, inkampani yethu ichithe uninzi lwabasebenzi kunye nezixhobo zokuphuhlisa ibhokisi ethe cwaka enentsebenzo elungileyo yokunciphisa ingxolo.
Oku konga abathengi imali eninzi yokwakha igumbi lokuvelisa, ngaloo ndlela kuncitshiswe iiprojekthi zokunciphisa ingxolo kwigumbi lokuvelisa.
Iimpawu zeseti yomvelisi ongathethiyo
1.Ngokusebenza kwengxolo elungileyo esezantsi, inokunciphisa ngempumelelo ingxolo yeseti yomvelisi.
2. Iseti yomvelisi wegesi ethe cwaka ine-compact design, ukufakwa ngokulula, inkangeleko entle, kunye nemibala eyahlukeneyo inokwenziwa ngokwezifiso.
3.Sebenzisa i-multilayer yokukhusela i-impedance engafaniyo ne-acoustic ebiyelweyo, i-impedance enkulu edibeneyo.
4. Sebenzisa ukonga okuphezulu kokuncitshiswa kwengxolo yamajelo amajelo amaninzi kunye neendlela zokukhupha ukuqinisekisa ukuba iyunithi inamandla ombane awoneleyo.
5. Ukusetyenziswa kwendlela edibeneyo kulungele ukugcinwa kamva.
Isikhongozelo sohlobo lwegesi esetiweyo
Iseti yenkunkuma yegesi iseti yamkela ubume obuvaliweyo ngokubanzi, obunokukhawulelana neemfuno zokuphakamisa izinto ezininzi, ukuphatha kunye nokusebenza kweyunithi.
Umnyango wolondolozo lwekhabhinethi wamkela uyilo lwengcango olungenasandi, kwaye izinto zangaphakathi zokufaka ubushushu kwikhabhinethi zamkela izinto ezinamadangatye-anokugcina indalo, anemisebenzi yokulondolozwa kobushushu kunye nokugquma kobushushu kunye nokunciphisa ingxolo.
Umzimba webhokisi uxhotyiswe ngesibane sokukhanyisa isibane se-DC 24V, kwaye kufakelwe ipleyiti enamathelayo kudonga lwangaphakathi, kunye nepeyinti, kwaye umphezulu ugudile kwaye mhle.
Umphezulu webhokisi yebhokisi wenziwe ngepeyinti yokulwa umhlwa koomatshini bezibuko, ezinokuthintela ukufuma, umhlwa, ukutshiza kwelanga kunye netyuwa.
Uyilo lwesithuba sekhabhathi yeyunithi luyahlangabezana neemfuno zesithuba sokugcinwa kwemihla ngemihla kumacala amathathu nangaphezulu. Kukho iileli ezinyukayo, ukuhlolwa kunye nokugcinwa kweengcango, izixhobo zokumisa likaxakeka, iibhokisi zelindle, kunye neebholithi zomhlaba ngaphandle kwebhokisi.
Kufanelekile ukuba isebenze ngaphandle, kwaye ingangenisi imvula, ingabinalo uthuli, ifudumeze ubushushu, ingabinamlilo, irusi, ikhephu.
Egqithileyo Ukucaciswa kweMveliso ye-10 Kw LPG yeGesi yeJenereyitha
Okulandelayo: Izixhobo ezikhethiweyo
Ukucaciswa kweMveliso yeGesi yeNdalo eyi-1000KW / ...
Ukucaciswa kweMveliso ye-30 KW yegesi yendalo / ...
Ukucaciswa kweMveliso yeGesi yeNdalo eyi-200KW / ...
Ukucaciswa kweMveliso yeGesi yeNdalo eyi-50KW / Bi ...